विरोध बाहुनको होइन, प्रवृत्तिको
बलदीप प्रभाश्वर चाम्लिङ
मैले बाहुन शब्द प्रयोग गर्दा मलाई हाम्रैहरूले बाहुन विरोधी भनेर आरोप लगाइरहेका छन् । मलाई दुःख लाग्यो, उनीहरूको दासत्व चिन्तनले । तर खुशी पनि छु । किनकि मेरा वौद्धिक बाहुन साथीहरूले त्यसलाई स्वाभाविक ठानिदिनु भएको छ ।
हामी कसरी बाहुन विरोधी हुन सक्छौ ? के बाहुन मानव होइन र ? के उसमा मानवता हुन्न र ? के उनीहरु हाम्रा दाजुभाइ होइनन् र ? हो, म कदापि बाहुन विरोधी होइन । तर म अवस्य पनि आफ्नै जनजाति दाजुभाइ विरोधी चाहिँ हुँ, जसले कहिले पनि कुरा बुझेन, जसले बाहुनको दाँजोमा आफुलाई राख्न कहिले जानेन । छिमेकमा अधिकार र पहिचानविहिनलाई राखेर बस्नु सभ्य बाहुनको लागि पनि शोभनीय कुरा होइन ।
नेपालमा जातीय समस्या छ । जातीय समस्या समाधानको लागि बाहुनको प्रसंग आउनु स्वभाविक हो । बाहुनलाई बाहुन नभनेर के यहुदी, तामिल, आईरिस, नेग्रो भन्ने त ?
हो, बाहुनले बाहिर आफ्नो जातीय कुरा गरेर हिड्नुपर्दैन । किनकि उसको जातीय अधिकार र पहिचान संविधानमै सम्बोधन भएको छ । धर्मनिरपेक्षतालाई सनातन धर्म (हिन्दु धर्म) को संरक्षणसंग जोड्नु, हिन्दू धर्मको प्रतीक गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाउनु र संस्कृत भाषालाई निशान छापमा कुद्नु र यसको विकासको लागि सरकारी लागतमा पठनपाठन गराउनु बाहुनको जातीय मुक्तिको ठोस आयामहरू हुन् । यो कुरा चाहिँ किन बुझ्दैनन् हाम्रा जनजातिहरूले ? विरोध बाहुनको होइन, हाम्रैहरूको हो । यदि बाहुन पनि जनजातिको अवस्थामा रहन्थ्यो भने जातीय कुरा गर्थे कि गर्थेनन् ?
मेलापात जाँदा, घाँसदाउरा जाँदा, दोहोरी जाँदा, भोजभत्तेर जाँदा र युद्धमा जाँदा जनजातिलाई अगाडि लगाउने बाहुनले राजनीतिक रूपमा सिंहदरबार, बालुवाटार र शितल निवास जाँदा चाहिँ पछाडि लगाउँछ । तिनीहरूको गेटमा ताल्चा लगाइदिन्छन् । एम्बुस थापिदिन्छन् ।
सामाजिक रूपमा बाहुन र जनजातिको सम्बन्ध आत्मीय घनिष्ट छ । तर राजनीतिक रूपमा जनजाति र बाहुनको सम्बन्ध द्वन्दात्मक छ । कसरी भने, जनजातिलाई पर्दा बाहुनले सहयोग गर्छ । बाहुनलाई पर्दा जनजातिले सहयोग गर्छ । बाहुन र जनजातिबीच रोटी र बेटीको सम्बन्ध पनि समाजमा कायम छ ।
तर मेलापात जाँदा, घाँसदाउरा जाँदा, दोहोरी जाँदा, भोजभत्तेर जाँदा र युद्धमा जाँदा जनजातिलाई अगाडि लगाउने बाहुनले राजनीतिक रूपमा सिंहदरबार, बालुवाटार र शितल निवास जाँदा चाहिँ पछाडि लगाउँछ । तिनीहरूको गेटमा ताल्चा लगाइदिन्छन् । एम्बुस थापिदिन्छन् ।
बाहुनले विभेद समाजमा होइन, सत्तामा गरेका छन् । त्यसो भएको हुँदा कसैले बाहुनको विरोध गर्छ भने त्यो राजनीतिक हो, मानवीय होइन । किनकि बाहुनको पनि रगत रातै हुन्छ । यो कुरा नबुझी मलाई बाहुन विरोधी कसैले भन्छ भने तिनीहरूप्रति मेरो सहानुभूति छ । किनकि तिनीहरूले जे बुझेका छन् । मैले पनि त्यो बुझेको छु । तर उनीहरूले त्यो बुझेका छैनन्, जो मैले बुझेको छु । यो मेरो संघर्षशील जीवनको निष्कर्ष हो ।